vendredi, 21 août 2020 11:22
Malagasy tany Inde: Tonga an-tanindrazana omaly ny 111
Nigadona omaly maraina teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny fiaramanidina an’ny Air Madagascar nitondra ireo Malagasy tavela tany Inde nody an-tanindrazana. Niisa 111 no tonga raha 150 izy ireo tany ampiandohana. Nisy ireo niova hevitra tamin’ny fotoana farany ka tsy nandeha, tao ireo tsy nahavita fitiliana PCR notakiana nialoha ny fiaingana ary ny sasany kosa nanana olana. Nitsabo tena tany Inde ny ankamaroan’izy ireo, misy mpianatra, ary misy antony arak’asa no nandehanany ka tavela tany. Natao ny fitiliana PCR ireo mpandeha rehetra teo ampahatongavana, avy eo dia mamonjy ny toerana fihibohana izy ireo miandry ny valin’ny fitiliana azy ireo. Notsinjaraina amin’ny toerana telo izy ireo, dia eny amin’ny Villa Verte Ambatomirahavavy, ao amin’ny Hôtel Ibis Ankorondrano ary eny Antanetibe.
Hampahafantarina eny amin’ny Lapam-pajakana Iavoloha amin’ny fiafaran’ity tolakandro ity ny Governemanta amin’ny endriny nasiam-panovana sy ireo mpikambana mandrafitra azy. Araka ny Andininy faha-54 amin’ny Lalampanorenana dia ny filoham-pirenena no manendry ny praiminisitra atolotry ny antoko na vondron’antoko manana ny maro an’iasa eo anivon’ny Antenimieram-pirenena. Araka ny tolokevitry ny praiminisitra dia ny filoham-pirenena no manendry ny minisitra ary koa mampitsahatra azy amin’ny asany. Andininy faha-2 amin’ny Lalampanorenana indray manipika mazava fa tsy mahazo mitana andraikitra ambony anaty fiangonana ny lehiben’ny andrimpanjakana sy ny mpikambana anaty governemanta. Ao amin’ny Andininy faha-64 no milaza fa tsy azo ampirafesina amin’ny asan’ny olomboafidy ny maha mpikambana ao anaty governemanta.
Namoaka didy ny filohan'ny Korea avaratra, Kim Jong-Un, nanombaka ny volana jolay teo, fa voarara ny miompy alika ho namana an-trano, fa na amidy amin'ny mpanao sakafo, na aterina any amin'ny Zoo mpanjakana. Ny fiompiana alika hoy hatrany Kim Jong-Un dia fanarahana ambokony ny fomban'ireo mpanambony saranga tandrefana.Efa mitily ireo trano mbola miompy alika ny fitondrana koreanina avaratra, ka tereny vonoina ny alika, na ho entiny ankitsirano. Ankehitriny moa dia tratran'ny fairano amerikanina i Korea avaratra, ka 60% n'ny mponina dia tsy ampy sakafo, raha ny tatitry ny firenena mikambana, ka ahian'ireo tompon'alika fa entina amahana olana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izao fanapahan-kevitra izao. Ny alika moa any Korea avaratra dia anisan'ny sakafo mafilotra ho anin'izy ireo.Mampiaka-peo ireo mpiaro ny biby maneran-tany.
Miomana amin’ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE izay hotanterahina ny 1 septambra 2020 ireo fari-piadidiam-pampianarana na Cisco manerana ny Nosy. Ho an’ny Cisco Nosy Be dia miisa 2 735 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny CEPE. 09 taona no zandriny indrindra amin’ireo mpiadina, ary 17 no zokiny indrindra.Hitsinjara amin'ny foibem-panadinana enina ireo mpiadina ireo.
248 ireo Malagasy tavela any Inde nisoratra anarana fa hody an-tanindrazana. Ny sidina MD8161 an’ny Air Madagascar no haka azy ireo any an-toerana. Ny alakamisy 20 aogositra amin’ny 3ora maraina no hianga ao Mombay ny fiaramanidina hiazo an’i Madagasikara. Miantoka ny sarandalana izay hody. 799 dolara na 3 tapitrisa Ariary eo ny tapakila iray avy any Inde miazo an’i Madagasikara amin’ity sidina manokana ity. Ity no andiany faharoa amin’ny fampodiana an-tanindrazana ireo teratany Malagasy tavela tany ivelany, hotaterin’ny Air Madagascar taorian’ireo 233 tonga ny faran’ny herinandro teo avy any Eorôpa, noraisina tao Marseille sy Paris. Atao fitiliana PCR izy ireo vao migadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ary atokam-ponenana avy hatrany miandry ny valin’ny fitiliana azy ireo.
Ombivavy iray no teraka kambana saingy sampona satria niraikitra. Iray ny vatan’ilay zanak’omby, efatra ny tongony saingy roa ny lohany. Maty ilay zanak'omby. Tao Behara Amboasary Atsimo no nitrangan'izy ity ny faran'ny herinandro teo. (Jereo Sary Tohiny)
Mihoatra ny iray tapitrisa ny olona voan’ny Covid-19 taty Afrika, maherin’ny 770 000 tamin’ireo no efa sitrana raha 24 000 mahery kosa no lavo. Tarehimarika vonjimaika ihany ireo. Afrika Atsimo, Ejipta, Alzeria ary Maroc no be tranga sy olona namoy ny ainy indrindra noho io valanaretina io. (Sary nindramina, République démocratique du Congo)